Sawirro: 10 Qof oo Lagu Dilay Weerar Gaari Jiirsiin Ah oo Ka Dhacay Kanada. – Shabakadda Amiirnuur
April 24, 2018 5:45 am by admin Views: 85
Ugu yaraan 10 qof ayaa geeriyootay 15 kalana waa ay dhaawacmeen kaddib markii nin gaari waday uu jiirsiiyay dad muwaadiniin ah oo marayay meel waddo ah oo ku taalla magaalada Toronto ee caasimadda dalka Canada.
Ciidamada Booliska ee magaaladaas ayaa sheegay in ninka weerarka geystay ay xabsiga dhigeen islamarkaana ay baaritaan ku wadaan, kaasoo ay magaciisa ku sheegeen Alek Minassian, oo 25 jir ah.
Peter Yuen, oo ah taliye ku xigeenka Booliiska Toronto, ayaa ka codsaday dadkii ka ag dhawaa xilliga falka in ay tagaan xarumaha baarista si ay booliska ugu garab siiyaan hawlaha baaritaan ee ay wadaan.
Sidoo kale maamulka magaalada Toronto, ayaa shacabka ku wargeluyay iney muddo xirnaan doonto wadada uu weerarku ka dhacay, iyagoo xusay in ay soo sheegi doonaan ogeysiis dambe markii uu baaritaanka dhamaado.
Maamulka ayaa sidoo kale weerarka ku sheegay inuu yahay waxa ay ugu yeereen mid argagixiso, inkastoo aaney wali soo bandhigin tafaasiil dheeraad ah.
Illaa iyo hadda lama oga waxa uu ahaa ninka weerarka geystay, waxaana dalka Kanada ay maanta u tahay maalin murugo iyo baroor diiq ah.
Dowladaha reer galbeedka ayaa gumaad aan caadi ahayn ka wada dalal badan oo caalamka islaamka ah siiba Shaam, waana midda keeneysa in xilliyada qaar ay dad muslimiin ah geystaan weeraro aar gudasho ah. Sidoo kale waxaa xilliyada qaar wadamadaas ka dhaca weeraro ay geystaan dad aan muslimiin ahayn oo ka carooday ciriiriga nolosha iyo wax yaabo lamid ah.